Abaalmarinta Caddaaladda - Sheekooyinka Guusha - Ramzi Ahmed Yousef
Wuxuu markale Yousef ka soo baxay dalka Philippines halkaasoo uu ku hawlanaa shirqool argagixiso oo culus. Wuxuu Yousef qorsheeyay in la dilo Baabaha John Paul II markii ay taariikhdu ahayd 4-tii Janaayo, 1995 xilligaas oo uu Baababaha booqanayey dalka Philippines, iyo dhowr maalmood kaddib in uu qaaradda Aasiya ku qarxiyo 12 dayuuradood oo Mareykan ah. Waxaa shirqoolka oo idil loo yiqiin “Oplan Bojinka,” kaasoo marka lagu tarjumo af Carabiga suuqa macnihiisu yahay “Hawlgalka Qaraxa” ama “Hawlgalka Bing Bang.” Wuxuu Yousef si caddaan ah uga dambeeyay Oplan Bojinka, balse dadkii kale ee ugu muhiimsanaa oo ka qayb qaatay Oplan Bojinka waxaa ka mid ahaa Wali Khan Amin Shah, Abdul Hakim Murad, Khalid Shaikh Mohammad (Yousef adeerkiis/abtigiis oo ka mas’uul ahaa weerarradii 11-kii Sebtembar), – kuwaasoo dhammaantood ahaa xubno la dhaariyey oo ka tirsan al-Qaida.
Iyadoo ay ka tirsanayd shirqooolka, markii ay taariikhdu ahayd 21-ka iyo 22-ka Janaayo, 1995, waxay ahayd in shan qof argagixiso ah ay waxyaabaha qarxa ku rakibaan 12 dayuurado oo uu Mareykanka leeyahay oo marka hore hakad ku ah Bariga iyo Koonfurta Bari Aasiya ay kaddibna dayuuradaha halkaasi ka sii tagaan oo ay mar ku wada qarxaan Badweynta Baasiifikada dusheeda. Mid kasta oo ka tirsan shanta argagixiso waxaa loo xilsaari lahaa in uu raaco dayuurad labaad ama seddexaad illaa 12-ka dayuuradood oo idil bambooyin lagu wada rakibo. Waxaa la qiyaasay in qorshaha qaybtiisan ay guud ahaan ku dhiman lahaayeen in ka badan 4,000 oo qofood.
Nasiib wanaag, Yousef iyo kalkaaliyeyaashiisaba waxaa la soo gudboonaatay taxaddir xumo, taasoo keentay in ay khasaaraan. 6-dii Janaayo, 1995, Yousef iyo Murad waxay ku qasbanaayeen in ay ka baxsadaan gurigoodii Manila kaddib markii gurigoodii Manila uu qaac ka dhashay kiimiko la isku qasay, oo ka baxday dariishadda guriga. Wuxuu Yousef ka codsaday Murad in uu guriga dib ugu soo laabto si uu u soo qaado koombiyuutarka la qaato iyo waxyaabo kale oo caddeymo loo adeegsan karo. Markii uu Murad ku soo laabtay guriga, waxay is qaabileen booliiska oo goobtaasi tagay hortiisa. Yousef, markii uu ogaaday in Murad la qabtay, wuxuu u baxsaday dalka Pakistan.
Bishii Feebaraayo 1995, qof xog ogaal, oo arkay buugga ay RFJ soo saaraan islamarkaana ay dhiirigelisay abaalmarintii ku tiil, ayaa u tagay safaaradda Mareykanka ee Islamabad, Pakistan halkaasoo uu ku bixiyey warbixintii lagu ogaaday halkii uu Yousef ku sugnaa. 7-dii Febaraayo, 1995, maamulka dawladda Pakistan, oo ay caawiyeen saraakiisha Amniga Dibulumaasiyiinta ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda, ayaa waxay Yousef ku xireen Islamad, Pakistan, kaddibna waxay u musaafuriyeen dalka Mareykanka. Wuxuu haatan Yousef ku jiraa xabsi ku yaal gobolka Colorado. Afartii qof ee kale ee kaalinta weyn ka qaatay Oplan Bojinka ayaa iyaguna la xiray.